(SAWIRO): Xiddigaha Real Madrid oo la kulmaya Wiil yar oo Falastiin ah oo ay Reerkiisa dileen Yuhuudda. – Radio Dalsan FM 91.5 MHz | Warar Sugan | Somalia News
Axmed Dawabasha waa wiil Falastiin oo 5 jir ah, kaasi oo ka badbaaday weerar ay Xag-jirayaasha Yuhuudda ku dileen Aabihiisa, Hooyadiisa iyo saddex carruur oo la dhalatay oo uu ku jiray Waalidkiisa Ali oo 18 bilood jir ahaa.
Axmed Dawabasha waxaa la dhigay Isbitaalka, kadib, markii ay dhaawacyo gubasho ah ka soo gaareen dabka la qabadsiiyey guridooda.
Hooyadiisa, Rixaam waxay u geeriyooday dhaawacyadii ka soo gaaray dabkaasi.
Xag-jirayaasha Yuhuudda waxay bishii July 31-dii ee sannadkii hore weerareen Guriga Qoyska Dawabasha oo ku noolaa Tuulladda Duuma ee Daanta Galbeed ee dhulalka la-haysto ee Falastiin.
Falkaasi waxaa cambaareeyey Calaamka, wuxuuna aad u xumeeyey xiriirka Yuhuudda iyo Falastiiniyiinta.
Shabakadaha ay Bulshadda ku wada xiriiraan waxaa saamayn ku yeeshay, kadib, markii ay Falastiiniyiinta soo geliyeen Sawiradda wiilka madaxa ugu duuban tahay Faashadda ee labisan Maaliyada Kooxda Real Madrid.
Axmed Dawabasha waxa uu maanta ka degay Garoonka Diyaaradaha ee caasimadda dalka Spain ee Madrid, isagoo marti ah, lana kulmi doona Xiddigaha Kooxda Real Madrid oo uu ku jiro Cristiano Ronaldo oo wiil taageere u ah.
WiilKa yar waxa uu ka soo kabanayaa dhaawacyaddii soo gaaray 8 bilood ka hor, waxaa Garoonka Madrid ku soo dhaweeyey Koox yar oo Wanaag-doonayaal ah oo Calanka Falastiin walfinayey.
Afhayeen u hadlay Real Madrid ayaa u sheegay Wakaalladda Wararka ee AFP in Wiil yar uu gashanaa Koofiyad uu ku daboolayey gubashadda ka soo gaartay madaxa.
Waxaa la filayaa in berri lagu soo dhaweeyey Garoonka Naadiga Real Madrid, oo uu booqasho Khaas ah ku tegi doono, iyadoo Warbaahinadda laga xirayo booqashadaasi.
Axmed Dawabasha waxa uu rajeynayaa inuu la kulmo Ciyaaryahanka saddexda jeer ku guuleystay Koobka Daabka ee Ronaldo oo ah Xiddiga Kooxda K/cagta ee Real Madrid, kaasi oo wiilka yar ku casuumay inuu soo booqdo isla markaana uu awoodo inuu safar geli karo.
Adeerkiisa Xuseen Dawabsha ayaa sheegay inuu xaalladda wiilkiisa soo hagaagayso, balse uu u baahan yahay waqti dambe in la daryeelo, si uu uga soo bogsado dhaawacyadda dabka ee soo gaaray.
Waxaa wiilka la socda Adeerkiisa iyo Awoowihiisa, kuwaasi oo u sheegay Wakaalladda Wararka ee AFP inay la kulmi doonaan Kooxda Real Madrid, waxayna u mahadceliyeen Kooxda Real Madrid ee ay ka heleen casuumadda.
Madaxa Xiriirka K/cagta ee Falastiin, Jibriil Rajuub waxa uu sheegay inay Kooxda Real Madrid yihiin kuwo dib u soo celinayo Rajadda Wiilkaasi oo inta badan xubnaha qoyskiisa ku waayey dabkaasi.
Cristano Ronaldo waxa uu bishii December ee sannadkii hore la kulmay wiil 3 jir oo u dhashay dalka Lubnaan, kaasi oo labadiisa Waalid ku waayey Isqarxin ka dhacday Lubnaan.
Ciyaaryahanka kale ee ay Ronald xifiltamaan ee Lionel Messi ee u ciyaara Kooxda Barcelona ayaa isagana ku tallaabsaday arrintaasi oo kale, kadib, markii uu taageero u fidiyey Wiil 5 jir ah oo u dhashay dalka Afganistan oo lagu magacaabo Murtaza Axmedi.
Shabakadaha ay Bulshadda Caalamka ku wada xiriiraan ayaa waxaa qabsaday sawirka wiilkaasi yar oo bac balaastik ah ka dhigtay Funnaanad, kuna qoray magaca iyo Nambarka uu qaato Messi.
Lionel Messi waxa uu bishii hore u diray Wiilkaasi yar ee taageeradda u ah haddiyad funaanado ah, waxaana wiilka gudoonsiisay Hay’adda UNICEF.
NISA reveals Alshabaab plan to attack major ports